Jadwalka doorashada madaxtinimo iyo midda Baarlamaan ee Puntland oo la soo saaray – Bandhiga
Jadwalka doorashada madaxtinimo iyo midda Baarlamaan ee Puntland oo la soo saaray
Guddiga xallinta Khilaafaad ee doorashada Baarlaamaanka Maamulka Puntland ayaa shaaciyay waqtiga ay dhaceyso doorashada Guddoomiyaha Baarlamaanka, magacaabidda Guddiga doorashada Madaxweynaha iyo jadwaleynta doorashada Madaxweynaha.
Guddiga xallinta Khilaafaadka ee dhismaha Baarlamaanka Maamulka Puntland ayaa sheegay in 31ka ishan ay noqoneyso maalinta ay isu imanayaan dhamaan Xildhibaannada cusub ee Baarlamaanka Maamulka Puntland.
Sidoo kale Guddiga ayaa sheegay 3da January ay Xildhibaannada Baarlamaanka Puntland dooran doonaan Guddoomiye iyo ku xigeennadiisa halka 5ta Bisha January ay Baarlamaanka magacaabi doonaan Guddiga doorashada Madaxweynaha Puntland.
Doorashada Madaxweynaha Puntland oo ilaa hadda ay isu diiwaangeliyeen 24 Musharrax ayaa lagu wadaa in ay dhacdo 8da January 2019,waxaana musharrixiinta ka mid ah madaxweynaha hadda talada haya ee C/Wali Maxamed Cali Gaas.
Amaanka degaannada Puntland ayaa aad loo adkeeyay iyada oo dhameystirka Xildhibaannada ka dhiman Baarlamaanka Puntland ay wali socoto